Fifidianana · Septambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Septambra, 2010
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Septambra, 2010
Venezoela: Sarimihetsika an'aterineto mampirisika ny olompirenena hifidy
Hifidy ny vahoaka any Venezuela ny faha 26 septambra hanavao ny solombavam-bahoakany, sehatra mpanao lalàna tokana mandrafitra ny kongresy, ary amin'ny aterineto kosa, olona 12 no manao sy manatontosa sarimihetsika maromaro mitaona ny mponina handatsa-bato.
Azia Afovoany sy Kaokazy 19 Septambra 2010
Oseania 16 Septambra 2010
Tapitra ny lalao fiandrasana fifidianana any Aostralia. Nanangana governemantan'ny Mpiasa vitsy an'isa i Julia Gillard. Indreto misy fanehoan-kevitra sasany amin'ny aterineto.
Amerika Latina 14 Septambra 2010
Mbola miandry Governemanta Vaovao i Aostralia
Oseania 07 Septambra 2010
Herinandro taorian'ny fifidianana, dia mbola miandry ny fijoroan'ny Governemanta vaovao i Aostralia. Samy tsy nisy nahazo ny ampahan'isa be indrindra amin'ireo seza 150 ao amin'ny Antenimiera avokoa ny antoko tsirairay. Sempotra manombatombana, tsy ny mety ho valim-pifidianana ihany, fa ny antony "nampihantona" ity Antenimiera ity ireo mpitoraka bilaogy.